အချောင်သမား အယ်ဒီတာတွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အချောင်သမား အယ်ဒီတာတွေ
Posted by phone_kyaw on Dec 25, 2011 in Copy/Paste | 8 comments
ကျနော်တို ့နိုင်င်ငံက အယ်ဒီတာတွေ အချောင်သမားတွေများနေပြီလို ့ကျနော်ပြောချင်တယ်။ ဘာ့ကြောင့် ဒီစကားကို ကျနော်ပြောရလဲဆိုတော့ မခံနိုင်တော့လို ့ပါ။
အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ကျနော်ဟာ စာရေးကျွမ်းကျင်တဲ့သူတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဝါသနာပါလို ့စာရေးတယ်။ ကိုယ့်နှလုံးသားနဲ ့အုံးနှောက်ကို အသုံးပြုပြီး စာတွေရေးတယ်။ ရေးပြီးရင် နာမည်ရနေတဲ့ မီဒီယာတွေကို ပို ့ဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်မှာလည်း ဘလော့ဂ်တစ်ခုရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်က နာမည်ကြီးတဲ့ဟာ မဟုတ်တော့ စာဖတ်သူတိုင်း ကိုယ့်အရေးအသားကို ဖတ်နိုင်မှာမထင်လို ့နာမည်ကြီး ဝက်ဆိုက်ဒ်တွေ လူဖတ်များတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေ ့ကို ပို ့ဖြစ်ပါတယ်။
အယ်ဒီတာတွေက ကိုယ့်စာမှုကို ရွေးတဲ့အခါရှိသလို မရွေးတဲ့အခါလည်း ရှိတယ်။ အထူးသဖြင့် မရွေးတာများပါတယ်။ စာမှုရွေးပြီး ဖော်ပြရင်တောင် ပိုက်ဆံပေးဖို ့နေနေသာသာ ချီးကျူးစကားလေးတောင် အယ်ဒီတာဆီက ပြန်မလာတာ များတယ်။ များတာမဟုတ်ဘူး ရှိကိုမရှိတာပါ။
ကျနော်ဖြစ်စေချင်တာက ဘယ်နေရာမှာ ဘာလိုနေလို ့၊ စာအရေးအသားညံ့လို၊ အကြောင်းအရာမကောင်းလို ့ဆိုပြီး အကြောင်းကြားစာလေးရေးရင်တောင် ကျေနပ်နိုင်သေးတယ်။ အခုတော့ စားပြီးနားမလည် အချောင်သမားအယ်ဒီတာတွေလိုပဲ။
ကိုယ်ကတော့ မရလဲနေပါစေ၊ ကိုယ်ရေးထားတဲ့စာကို သူတို ့ဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ ့ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြခွင့်ရရင်ပဲ အတော်လေးကို ကျေနပ်နေပြီ။ ဒါက စာရေးတဲ့သူတိုင်းရဲ ့ခံစားချက်ဖြစ်မယ်လို ့ယူဆတယ်။
ကျနော်ဟာစာရေးစားတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူး။ ကျနော့်မှာ အလုပ်အကိုင်ကောင်းကောင်းရှိတယ်။ အယ်ဒီတာတောင် ကိုယ်တိုင်ငှားပြီး မလေးရှားမှာ ဂျာနယ်တစ်ခုတောင်ထုတ်ခဲ့ဘူးတယ်။
စာရေးဆရာတွေရဲ ့စာမှုကို ငွေပေးပြီးတောင်းခဲ့ဘူးတယ်။
စာရေးသူ၊ စာဖတ်သူ၊ အယ်ဒီတာတွေမှာ အပြန်အလှန် အကျိုးခံစားခွင့် အသိအမှတ်ပြုမှု လေးစားသမှုရှိရမယ်လို ့ကျနော်ယူဆတယ်။
စာရေးတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ရင်ထဲမှပြည့်နေတဲ့ခံစားချက်တွေကို တခြားသူတွေသိအောင်ပြောပြတာဆိုပြီ ကျနော်ခံယူထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကအပင်ပန်းခံ ရေးထားတဲ့စာမှုကို နှမလိုးအယ်ဒီတာတွေက မခန် ့လေးစားလုပ်တာကို စောက်ရမ်းတင်းတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီစာကိုရေးတာပါ။
တစ်ခါတုန်းက ကျနော် ဟစ်တိုင်စာမျက်နှာကို ကျနော့်စာမှုကို ပို ့ဖြစ်တယ်။ ဟစ်တိုင်ဆိုတာက စာမှုပေါင်းစုံကို ဖြစ်သလိုတင်ဖြစ်သလိုလုပ်ထားတဲ့ ဝက်ဆိုက်ဒ်ဖြစ်ပေမဲ့ နာမည်အတော်အတန်ရတဲ့ ဝက်ဆိုက်လို ့ပြောလို ့ရတယ်။ အယ်ဒီတာလုပ်သူက ကျနော့်ဆီက ခွင့်ပြုချက်မတောင်းပဲ ကျနော်ရေးထားတာမဟုတ်တဲ့ စာပို်ဒ်တစ်ခုကို ကျနော်စာမှုထဲ ထိုးထည့်ပြီး တင်လိုက်တယ်။ ကျနော်က ပြန်ဖတ်ကြည့်ပြီး ဒီစာပိုဒ်ကို ဖြုတ်ပေးပါဆိုတော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေခဲ့တယ်။ ဆိုတော့ အယ်ဒီတာလုပ်တဲ့လူက နားမလည်ပဲ အယ်ဒီလုပ်တာကောင်းသလား။
နောက်ပြီးတော့ မိုးမခမှာ အမြဲတမ်းစာရေးနေတဲ့ ကိုမျိုးမြင့်လည်း ဒီလို အတွေ ့အကြုံကို ရခဲ့တယ်။ အယ်ဒီတာလုပ်သူမောင်ရစ်က ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ကို ခွင့်ပြုချက်မတောင်းပဲ ပြောင်းလိုက်တယ်။ စာရေးသူကိုမျိုးမြင့်ချိုရေးတဲ့ခေါင်းစဉ်က “သာမန်အချိန်မှာ သာမန်ပြည်သူဖြစ်ချင်သူ” လို ့ရေးခဲ့တယ်။ မိုးမခ အယ်ဒီတာမောင်ရစ်က “စစ်မှုထမ်းဥပဒေဖြင့်တိုုင်းပြည်ကိုုစစ်ကျွန်ပြုတော့မည်” ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်တစ်ခုလုံးပြောင်းလိုက်တော့ အပင်ပန်းခံပြီးရေးထားတဲ့ ကိုမျိုးမြင့်ချိုဘယ်လောက်ဒေါသထွက်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ စာရေးတယ်ဆိုတာ စာဖတ်တာထက် အရမ်းပင်ပန်းတယ်ဆိုတာကို အယ်ဒီတာတွေသိဖို ့ကောင်းတယ်။ မသိလို ့မဟုတ်ဘူးထင်တာပဲ။
သူများဆီက အချောင်ယူပြီး နာမည်ရနေတဲ့ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေဆိုရင်လည်း ကာတွန်းကိုစောငိုရေးထားတဲ့ ကာတွန်းတစ်ပုဒ်ကူးပြီး သူ ့ဆီမှာတင်တယ်။ တင်တဲ့အခါရိုးရိုးသားသားမတင်ဘူး။ နာမည်ပါပြောင်းပြီးတင်တယ်။ ခွင့်ပြုချက်လည်းတောင်းတာမဟုတ်။
ဒါတွေကိုကြည့်ရင် အယ်ဒီတာလုပ်သူတွေဟာ စာရေးသူတွေကို စော်ကားနေသလိုပဲ။ သူတို ့ပဲတက်။ သူတို ့ပဲသိသလိုမျိုး။
မဇ္ဇိမက ညီအစ်ကို အယ်ဒီတာ။ ဧရာဝတီက ညီအစ်ကိုအယ်ဒီတာတွေကိုလည်းကြည့်အုံး။ သူတို ့ကို ဘယ်သူက ဒီရာထူးပေးလဲမသိဘူး။
နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ အယ်ဒီတာတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို ့အတွက် လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ မြန်မာပြည်ကလူတွေကတော့ အတော်လွယ်ပါတယ်။
ပြည်ပမှာ ဝက်ဆိုက်ဒ်တွေမှိုလိုပေါက်နေတယ်။ ဒီထဲမှာ အတိုက်အခံတွေထဲက သတင်းမီဒီယာဝက်ဘ်ဆို်က်တွေကို ကျနော်ပြောချင်တယ်။ ဥပမာ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ၊ မိုးမခ၊ ဟစ်တိုင်၊ နေ ့သစ်၊ မောက္ခ၊ လူထုအသံ၊ စတဲ့ မီဒီယာတွေတစ်ပုံကြီးပါ။ သူတို ့တွေကို စာမှုပို ့တိုင်း ရွေးချင်မှရွေးတယ်။ ရွေးပြီးရင်လည်း ပိုက်ဆံပေးတယ်မထင်နဲ ့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားက လွဲရင် ဘာမှ အရည်မရအဖတ်မရ ကျေးဇူးမျိုးတောင်သူတို ့ဆီက ပြန်ရတယ်မထင်နဲ ့။
စာရေးသူတွေရဲ ့စာတွေကို စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေက သူတို ့ဝက်ဆိုက်မှာလာပြီး စာဖတ်ကြတယ်။ ပြီးရင် သူတို ့ပဲ နာမည်ရတယ်။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် အလှူငွေနဲ ့ကြော်ငြာခတောင် ရသေးတယ်။ စာရေးသူခင်ဗျာ သူရေးထားတဲ့စာလေးကို ဖတ်ပြီး ပီတိဖြစ်တာကလွဲလို ့လီးတောင်မတောင်နိုင်ဘူး။
စာမှုပို ့ရင်လည်း ဟိုစာကြောင်းဖြုတ်၊ ဒီစာကြောင်းဖြုတ်နဲ ့။ သူတို ့ကြိုက်တဲ့စာမှုဆိုရင်တင်တယ်။ မကြိုက်ရင် မတင်ဘူး။ မရွေးရင်လည်း ဘာ့ကြောင့်မရွေးတာလဲဆိုတာကိုတော့ စာရေးသူတွေကို ပြန်ပြီးအကြောင်းပြန်သင့်တယ်။ အခုတော့ ငါးလိုးမသား အယ်ဒီတာတွေစောက်အရည်အချင်းမရှိပဲ အယ်ဒီတာလုပ်တာကောင်းသလား။
အယ်ဒီတာတွေက ဘာပြောလဲဆိုတော့ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ဂျီးတော်နွားကျောင်းနေရတာဆိုပြီး သူတို ့ကိုယ်သူတို့ကယ်တင်ရှင်လေသံပြောကြတယ်။ ဆိုတော့ ကျနော်က ဒီလိုပြောချင်တယ်။ ဟေ့….နှမစောင်းအချောင်သမားအယ်ဒီတာတွေ မင်းတို ့ကို ဘယ်သူက အတင်းကျောင်းခိုင်းနေလို ့လဲကွ…။
ဦးဘဇင်းဘဒ္ဒ န္တမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says:
ခင်ဗျားတို့ စာရေးတဲ့လူတွေဆိုတာ လက်ကြောတင်းတဲ့သတ္တဝါတွေမှ မဟုတ်တာ
အခြားသွားမကြည့်နဲ့ ခင်ဗျားလို လက်ကြောမတင်းတဲ့ သတ္တဝါရေးတဲ့စာ
( ဟဲဟဲဟဲ အရဂါးနောက်ဒါ )
ဒီတခါတော့ ရွာလူမိုက်ကို ဘုန်းဂျီးလူထွက် အရက်သမားအောင်ဘု ချောင်းရိုက်ထဲ့လိုက်တာ ခွပ်ကနဲပဲ။။။။
အောင်ဘုရေ.. နေရာလုမဲ့ကောင်တော့ ပေါ်လာပြီ။ နင်ပိုဆဲနိုင်မှ တော်ကာကြမယ်…
သဂျီးရေ… ဒီပို့စ်ကိုတော့ နဲနဲထိန်းပေးစေချင်တယ်။ သူများဆိုက် အယ်ဒီတာတွေကို ဆဲဆိုဖို့ ကိုယ့်ဆိုက်ကို အသုံးသွားတာ မဖြစ်စေချင်လို့ပါ။ ဝေဖန်ရင်တောင် အတော်လွန်လှပြီ။ အဲသလို ရေးချင်ရင် ကိုယ့်ဆိုက်မှာကိုယ်ရေး၊ ဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်ကနေ ဖြန့်ပေါ့။
မကျေနပ်ရင် မရေးနဲ ့ပေါ့..
နင်ကို ဘတူက ဂုတ်ဆွဲပြီး အတင်းရေးခိုင်းနေလို ့လဲ..
တူ ့ဘာတူ သွားသွားပို ့ပြီး..စာမူမရွေး.စာမူခ မရတော့မှ..အယ်ဒီတာတွေမကောင်းဘူး လာလုပ်နေတယ်..
ကိုရင်ဘုန်းကျော်. ဒါကို.. .မေးဂရုမှာတင်ထားတာလည်းတွေ့ပါတယ်..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ဒီကနေဟိုကိုချတယ်.. ဟိုကဒီကိုပြန်ချတယ် ဆိုတာတွေမဖြစ်အောင်.. အထင်မမြင်မမှားကြလေအောင်.. ဒီပို့စ်ကို တော်ကြာနေပိတ်ပါမယ်နော..
ဒီလိုရေးလိုက်လို့.. အယ်ဒီတာတွေဖက်က.. ရပ်တည်ပေးတာမဟုတ်ပါ..။
အဲ့ဒီ နှမစောင်း အချောင်သမား နာနိုးမသားတွေဆီပဲ..
ဒီစာရေးနေတာ… ကြာတယ်ကွာ.. မီးတုတ်… ရှိူ့.. ရှိူ့.. ရှဲ…
ဆဲတာတွေပါနေတော့ …လူတွေဘယ်လက်ခံမလဲ လူဇိူး
ပိုစ့်တခုလုံး ဖြုတ်မပစ်ပါနဲ့……. ဆဲတာတခုကလွဲရင် သူပြောတာမှန်ပါတယ်။
အယ်ဒီတာတွေ မကောင်းမှန်းသိရက်နဲ့ အမှတ်မရှိ သွားသွားပို ့တာကိုး……..ခံပေါ့
လူဘောင်ချစ် သန့်ဇင်ဌေး (ခ)ဘုန်းကျော်…မောင်ရင်ရဲ့ ဘလောဒ့်ကို အကိုအချိန်ကုန်ခံဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနေပါတယ်…မောင်ရင်ဟာ အမှန်တကယ်မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ရှိတဲ့လူမှန်ရင် မင်းရေးတဲ့စာတွေကို လူအအများစိတ်ဝင်စားအောင် ရေးတတ်ဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်…မင်းအနေနဲ့မှန်တယ်ထင်ပြီးတွေ့သမျှ လိုက်ဖဲ့နေမယ်ဆိုရင် မင်းရဲ့စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးဟာမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူး…မင်း ဒေါက်တာနိုင်အောင်တို့အကြောင်းကိုရေးတယ်..လူတွေစိတ်မဝင်စားဘူး..ဘာကြောင့်လဲ မင်းကို နအဖရဲ့ လူလို့မြင်နေလို့ပဲ…
အထုတ်တွေ…အရှုပ်တွေကို သက်သေအထောက်အထားတွေနဲ့ တင်ပြနိုင်ဖို့လိုမယ်ထင်တယ်…မင်းရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်မဟုတ်တဲ့ ဆဲတတ်တဲ့အကျင့်ကိုလည်း စာရေးတဲ့နေရာမှာပြင်ဖို့လိုပါမယ်….
မောင်ရင်ရဲ့ လူထုအသံမှာ ဖေါ်ပြပေးထားတဲ့ ဘယ်လိုလှူကြမလဲဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေးက ကောင်းပါတယ်…
မောင်ရင် အနေနဲ့ ဒီဆိုဒ်မှာ ဖေါ်ပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေး(သို့) စေတနာလွှဲမှားနေတယ်လို့မြင်မိတယ်…